» तपाईलाई थाहा छ ? मलद्वारमा सेक्स गर्दा के हुन्छ ?
तपाईलाई थाहा छ ? मलद्वारमा सेक्स गर्दा के हुन्छ ?
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार ००:११
उक्त मांसपेशी बन्द भएका बेला दिसा बाहिर आउन नसक्ने मात्र होइन, बाहिरबाट भित्र कुनै पनि कुरा सजिलै पस्न सक्दैन । यस्तो बेलामा लिङ्ग पसाउन गाह्राे हुन्छ र पसाउन खोजे पनि पीडा हुन्छ । मांसपेशी संकुचित भएर मलद्वार बन्द भएको अवस्थामा जबरजस्ती लिङ्ग, औंला वा अन्य वस्तु वारम्बार पसाइरहँदा उक्त मांसपेशी कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो भए दिसा रोकेर राख्न केही गाह्राे हुन्छ । उक्त मांसपेशीको कसरत गरेर त्यसलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा समस्या कम हुनसक्छ । गुदद्वार प्राकृतिक रूपमा यौन सम्पर्कका लागि बनेको अङ्ग होइन । त्यसका अतिरिक्त यसको छाला पनि योनीको तुलनामा निकै पातलो हुन्छ । त्यसैले चोटपटक लाग्न सक्छ । एजेन्सी
आजबाट टाईफाइड बिरुद्ध खोप लगाउन सुरु, मन्त्री खतिवडाले गरे उद्घाटन
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिकार गर्नुपर्छ: पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल
चैत २५ गतेदेखि बालबालिकाहरुलाई टाईफाइड बिरुद्धको खोप लगाइने
भीमफेदीमा १५ सैयाको अस्पताल बन्ने, जेष्ठनागरिकहरुबाट शिलान्यास
हेटौंडामा सुविधासम्पन्न ल्याबसहित बागमती पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा
थप ६५ जनामा कोरोना पुष्टि, १ सय ९२ निको